Myanmar agrees to the appointment of H.E. Mr. Karel Johannes HARTOGH as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Kingdom of the Netherlands to the Republic of the Union of Myanmar, with residence in Bangkok – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
Myanmar agrees to the appointment of H.E. Mr. Karel Johannes HARTOGH as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Kingdom of the Netherlands to the Republic of the Union of Myanmar, with residence in Bangkok
The Government of the Republic of the Union of Myanmar has agreed to the appointment of H.E. Mr. Karel Johannes HARTOGH as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Kingdom of the Netherlands to the Republic of the Union of Myanmar, with residence in Bangkok.
Mr. Karel Johannes HARTOGH was born in Paris, France, on 31 October 1956. He obtainedaHigh School Diploma from Van Maerlant Lyceum, The Hague, in 1967. Then he studied international law at the University of Amsterdam in 1985 and gotaMaster’s Degree in Law in 1987. He joined the Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands in 1985 and served at the European Department of the Ministry of Foreign Affairs up till 1989. From 1990 to 1999, he served in various capacities at the European Union Department, Export Controls Department, Strategic Affairs Department of the Ministry of Economic Affairs including the post of the secretary of Minister for Foreign Trade. He then served as Deputy Director of Southern Africa Department, Ministry of Foreign Affairs, from 1999 to 2001. Afterwards, he served as Principal Private Secretary of Minister of Foreign Affairs from 2001 to 2005. Before he assumed his duties as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Kingdom of the Netherlands to the Kingdom of Thailand, he served as Director of Asia Department of the Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands. He is married.
မစ္စတာ ကာရယ် ဂျိုဟန်း(စ်)နက် ဟာတော့ဂျ် အား ဗန်ကောက်မြို့အခြေစိုက် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော နယ်သာလန် နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအဖြစ်ခန့်အပ်ရန် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရက သဘော တူညီပြီးဖြစ်ပါသည်။
မစ္စတာ ကာရယ် ဂျိုဟန်း(စ်)နက် ဟာတေ့ာဂျ် အား ၁၉၅၆ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက်နေ့တွင် ပြင်သစ်နိုင်ငံ၊ ပါရီမြို့၌ မွေးဖွားခဲ့ပါသည်။ ၁၉၇၆ ခုနှစ်တွင် နယ်သာလန်နိုင်ငံ၊ သည်ဟိတ်မြို့ရှိ ဗမ် မာလန် လစ်စီယွန် ကျောင်းမှ အထက်တန်း ဒီပလိုမာလက်မှတ် ရရှိခဲ့ပါသည်။ ၁၉၈၅ ခုနှစ်တွင် အမ်စတာဒမ်တက္ကသိုလ်တွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေကို အထူးပြုသင်ကြားခဲ့ပြီး ၁၉၈၇ ခုနှစ်တွင် ဥပဒေမဟာဘွဲ့ကို ရရှိခဲ့ပါသည်။ ၁၉၈၅ ခုနှစ်မှ ၁၉၈၉ ခုနှစ်အထိ နယ်သာလန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဥရောပဌာနတွင် စတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၉၀ ခုနှစ်မှ ၁၉၉၉ ခုနှစ်အထိ စီးပွားရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိ ဥရောပသမဂ္ဂဌာန၊ ပို့ကုန်ထိန်းချုပ်ရေးဌာန၊ မဟာဗျူဟာရေးရာဌာနတို့တွင် ရာထူးအဆင့်ဆင့်ဖြင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံခြား ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီး၏ အတွင်းရေးမှူးအထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၉၉ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၁ ခုနှစ်အထိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ တောင်အာဖရိကဌာနတွင် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ၂၀၀၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၅ ခုနှစ်အထိ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး၏ ကိုယ်ရေးအတွင်းရေးမှူးချုပ်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ဘန်ကောက်မြို့ နယ်သာလန်သံရုံးတွင် ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော နယ်သာလန် သံအမတ်ကြီးအဖြစ် တာဝန်မထမ်းဆောင်မီအချိန်ထိ အာရှဌာနတွင် ညွှန်ကြားရေးမှူးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းသည် အိမ်ထောင်ရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ၊ ဇူလိုင်လ ၃၀ ရက်